Dr. Tint Swe's Writings: Atrial Fibrillation နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း
Atrial Fibrillation နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း
မင်္ဂလာပါ ဆရာ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး (၅ လ) AF (Atrial Fibrillation) ရောဂါရှိတယ်လို့ ဆေးစစ်ချက် ထွက်လာပါတယ်ဆရာ။ အဲရောဂါက စိုးရိမ်ရပါသလား။ ကလေးရော ထိခိုက်နိူင်ပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
လူ့နှလုံးဟာ ညှစ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ ပမ့်စက်ကလေးတခုနဲ့တူတယ်။ တကိုယ်လုံးကို သွေးလှည့်ပတ်စီးဆင်းဘို့ အဆက်မပြတ်လုပ်ပေးနေတယ်။ နှလုံးမှာ အခန်းလေးခန်းရှိတယ်။ အပေါ်နှစ်ခန်းကို အေထရီရမ်လို့ခေါ်တယ်။ အဲဒီအခန်းလေးရဲ့တုန်ခါမှု မူမမှန်တာကို အေထရီရယ် ဖစ်ဘရီလေးရှင်းခေါ်တယ်။ စည်းချက်ဝါးချက်ကျကျခုန်နေတာ မဟုတ်ပါ။ ဒီရောဂါက နှလုံးအဆို့ရှင်မကောင်းတာနဲ့မဆိုင်ပါ။
အဲလိုဖြစ်နေသူသူတွေက နောက်ဆက်တွဲဖြစ်မှာကို အထူးသတိထားရတယ်။ သွေးလွှတ်ကြောထဲမှာ သွေးခဲဖြစ်လာရင် အဲတာလေးက ကွဲထွက်ရာကနေ ဦးနှောက်ထဲက သွေးလွှတ်ကြောတနေရာမှာ သွားပိတ်တာကို ဆထုပ် (သို့) ဦးနှောက်သွေးကြောမတော်တဆဖြစ်ခြင်း (သို့) လေဖြတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆောရီး။ အဲလိုရောဂါရသူထဲက ၁၅% ကနေ ၃ဝ% ဟာ ဒီနှလုံးခုန်မမှန်တဲ့ရောဂါအခံ ရှိနေကြတယ်။ အဲလိုလူနာတွေကို သွေးကျဲဆေး အမြဲပေးထားရတယ်။ အဲတာကြောင့် ရောဂါရှိနေတာကို သိရမယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သိထားရမယ်။ ဘယ်လိုကုသလဲ သိထားရမယ်။ အဖြစ်နည်းအောင်နေထိုင်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လူက အားနည်းနေမယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်နေမယ်။ ပုံမှန်ခုန်တာမဟုတ်။ ရင်ပတ်ကနေ နှလုံးခုန်နေတာကိုမြင်နေမယ်။ ခေါင်းမူးမယ်။ အသက်ရှူခက်မယ်။ စိုးရိမ်စိတ်များမယ်။ သတိလစ်ချင်မယ်။ ချွေးပြန်မယ်။ အမေမခံနိုင်ဘူး။ ရင်ပတ်နာနိုင်တယ်။
တချို့မှာ ပုံမှန်ဖြစ်လာလိုက် အေထရီရယ် ဖစ်ဘရီလေးရှင်းဖြစ်လိုက်နေမယ်။ အဲတာကို Paroxysmal fibrillation လို့ ခေါ်တယ်။ ဖြစ်တာက ၇ ရက်ထက်မပိုလူး။ တနှစ်မှာ ဘယ်နှစ်ခါဖြစ်မလဲ မတူကြပါ။ တချို့ အမြဲဖြစ်နေကြတယ်။
နှလုံးအတက်ရတော့မယ်ဆိုရင် ရင်ပတ်ကစနေမကောင်းဖြစ်မယ်။ ရင်ပတ်အလယ်နေရာကဖြစ်တယ်။ မိနစ်အနည်းငယ် ကြာမယ်။ ပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဖိအားသက်ရောက်သလို ခံစားရမယ်။ ညှစ်ဆုပ်ထားခံရသလိုနေမယ်။ ပြည့်နေမယ်။ အလွန်နာမယ်။ ဆောရီး။ ကိုယ်အထက်ပိုင်းပါ အနေရခက်မယ်။ အသက်ရှူခက်မယ်။
Stroke ဆထုပ်လကဏာတွေကို အတိုကောက်နဲ့ F.A.S.T. လို့မှတ်သားနိုင်တယ်။
- Face Drooping မျက်နှာအမူအယာအရင်လိုမလုပ်နိုင်။ ပြုံရယ်တာမလုပ်နိုင်။
- Arm Weakness လက်ကောင်းကောင်းမလှုပ်နိုင်။ မမြှောက်နိုင်။ မကိုင်နိုင်။
- Speech Difficulty စကားအရင်လိုပီပီသသမပြောနိုင်။
- Time အရေးပေါ်ကုသမှုခံယူပါ။
မဖြစ်စေရပါလို့ အာမခံချက်တော့ မပေးနိုင်ပါ။ ဆောရီး။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြံပြုချက်တွေကို လိုက်နာရင် အဖြစ်နည်းစေပါတယ်။
၃။ သွေးခဲမဖြစ်အောင်ထိန်းနည်းတွေ ညွှန်ပါမယ်။
ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာတွေက ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်ကိုသာ စားသောက်ပါ။ ဆားနည်းပါ၊ ပြည့်ဝဆီနည်းပါ၊ ထရန့်စ်ဆီနည်းပါစေ။ ကိုလက်စထော နည်းပါ။ သွေးတိုး အမြဲထိန်းပါ။ အရက်နဲ့ ဆေးလိပ် ရှောင်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။ ဆီးချိုရှိရင် နေ့စဉ်ထိန်းနေပါ။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်မှာနေနေ နှလုံးရောဂါဘေးက ဝေးကြစေ။
ပုံမှန်နှလုံးခုန်ခြင်း Normal heartbeat http://watchlearnlive.heart.org/CVML_Player.php?moduleSelect=atrfib
ရောဂါရှိသူနှလုံးခုန်ခြင်း Atrial Fibrillation heartbeat http://watchlearnlive.heart.org/CVML_Player.php?moduleSelect=atrfib
P57 Hoodia ပိန်ဆေး အများပြည်သူသိစေရန် သတိပေးချက်
Breaking news သတင်းထူးများ
Our valued costume ဒုတိယ ပင်နီခေတ်
Nirvana Buddha လျောင်းတော်မူ
End of an Era ဆုတောင်းရင်ပြည့်တယ်
Risks of an X-ray and Diagnostic ultrasound အာလ်ထွ...
Lost and Found မြန်မာစာလုံးမှားများ ကောက်ရထား
Horseshoe Kidney မြင်းခွါပုံကျောက်ကပ် နှင့် အယူအဆလ...
Date Rape Drugs Protection အဓမ္မကျင့်ရာသုံးတဲ့ဆေးတေ...
Group Pages အုပ်စုစာမျက်နှာများသို့
The Grand Dinner ဂရင်းဒင်နာ
Life အသက်ရှိပြီဆိုတာ ဘယ်တော့စသလဲ
Clinical Evidence ဆေးကုသနည်းတွေရဲ့ ထိရောက်မှု
Blood Thinners သွေးကျဲဆေးများ
A dinner 50 years ago စဖြူဥပါးပိ
Nonsense Society ငွေကိုမလို အချိန်သာလို
Dirty drugs ညစ်ညမ်းဆေးတွေ
Lead poisoning ခဲဆိပ်သင့်ခြင်း
Viagra ဗိုင်ယာဂရာနှင့် အားကစား
Earwax and Babies ကလေး နားဖါ
Gone with the wind တူမသို့
Writing skill စာရေးတတ်ချင်တယ်
TB breakthrough ဆေးယဉ်တီဘီ စစ်နည်းသစ်
HIV Prevention ကာကွယ်ရေး
Quest for Leaders ခေါင်းဆောင်အရည်အသွေး
Nat (Spirit) နတ်ကိုးကွယ်မှု
Fistula-in-Ano (FIA) ဂရင်ဂျီနာ
Air pollution လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ သေဆုံးမှု
March 27 Speech ကာချုပ်မိန့်ခွန်း
Light for Education ပညာဆီမီး ထိန်ထိန်ညီး
Viral hepatitis အသည်းရောင်အမျိုးမျိုး
Spoken Language ဘယ်စကား တရားဝင်သလဲ
Passing fad ပေါ်ပင်
Love is blind အချစ်ဆိုသည်မှာ
Eucalyptus ဆေးဖက်ဝင် ငါးမည်ရ ယူကလစ်ပင်
Picture of Burma ပန်းချီဆန်တဲ့ မြန်မာပြည်
TB (Tuberculosis) တီဘီ
မန် နှင့် မာန်
Facial skin care မျက်နှာ
Red Label ဟက်ပီးဘာ့သ်ဒေး ဖွားဖွား
Energy drinks and alcohol mix အင်နာဂျီဒရင့် နဲ့ အရ...
လျက် နဲ့ လျှက်
ချွေ နှင့် ခြွေ
World Tuberculosis Day ကမ္ဘာ့တီဘီနေ့
Seasonal Literature ရာသီစာ
DUB အခါမဟုတ် ရာသီဆင်းခြင်း
Happy birthday မတ်လ (၂၂) ရက်
နှစ်စဉ် မတ်လ (၂၂) နေ့ကို ကမ္ဘာ့ရေနေ့လို့ ကုလသမဂ္ဂကနေ...
World Poetry Day ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့
The Road Not Taken ကိုယ်မရွေးခဲ့လမ်း
Pleural Effusions အဆုပ်ဖုံးအိတ်ထဲ အရည်အောင်းနေခြင်...
Experience လူသစ်များသို့ပေးစာ (၁)
Special Olympics World Winter Games စပါယ်ရှယ်အိုလံ...
Once uponatime တရံရောအခါက
English လူသစ်များသို့ပေးစာ (၃)
Flowers of the season ပန်းတို့၏သဘာဝ
ဆီး ဆည်း ဇီ ဇီး
History of Tit တစ်သမိုင်းကြောင်း
6 Signs Of Heart Disease နှလုံးရောဂါလို့ထင်စရာ ခြေ...
Space Shuttle လွန်းပြန်ယာဉ်
Food poisoning အစာဆိပ်သင့်ခြင်း
Vitamin B1 ဗီတာမင် ဘီ (၁)
Rejoinder ကွန်မင့်တွေကို ဖြေကြားခြင်း